मोदीको भ्रमणले ल्याएको तरंग -
मोदीको भ्रमणले ल्याएको तरंग
E Naya Khabar Reporter २०७५ जेठ २ गते बुधवार	| Big News, विचार ब्लग
विश्वकै तेस्रो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो एकै कार्यकालमा नेपालको तेस्रोपटक भ्रमण गर्ने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुन् । उनी नेपालको तेस्रो पटक भ्रमण सफलतापूर्वक गरेको चर्चा हुँदैछ । उनी यसै वर्ष आफ्ना प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालको अवधि पनि पूरा गर्दैछन् । भनिन्छ, मोदीकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढी नेपाल र भारतको सम्बन्ध उचाईमा पुगेको छ भने सबभन्दा तल झरेको पनि छ ।
मोदीको भ्रमणलाई लिएर नेपालमा दुईधार प्रष्टरूपमा देखिएका छन् । एउटा नकारात्मक टिप्पणी र अर्को धार्मिक तथा सांस्कृतिक भ्रमण भनेर । नेपालमा भारत विरोधी विभिन्न अवधारणाले दुई देशबीचको परम्परागत मैत्रीलाई बिथोल्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । ती मध्येमा केही राजनीतिक केही सामाजिक र केही आर्थिक सम्बन्धका विषयहरू रहेका छन् । भारतले नेपाललाई निल्न चाहेको र त्यसको लागि भारतले बुद्ध जन्मस्थलीलाई भारतमा प्रस्तुत गर्दै आएको आरोप प्रमुख रूपमा रहँदै आएको छ । राजनीतिक रूपले यो विषय महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । तथापि, यसपटकको भ्रमणको क्रममा मोदीले गरेको सम्बोधनबाट विगतका आरोपहरु पनि चिरिएका छन् ।
यदाकदा यो विषयलाई चर्काउन खोज्नेहरूको नेपालमा कहिल्यै पनि कमी भएनन् । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपालको भ्रमण गर्दा नेपालको संसद भवनमा सभासदहरू अगाडि साक्षी राखेर आम नेपालीहरूलाई विश्वसमुदायले सुन्नेगरी भने – बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन् । सभासदहरूले पर्रर ताली पडकाएर मोदीको त्यो अभिव्यक्तिको स्वागत जोडदार ढङ्रगले मात्र गरेनन् नेपाली सञ्चारले त्यसलाई विशेषरूपले उठायो । बुद्ध नेपालकै हो । अर्को भारतले नेपाललाई एक सार्वभौम देश मानेको छैन भन्ने राजनीतिक सवाल खडा गर्ने गरिएको थियो ।
नेपाल सार्वभौम देश भएको प्रमाण संयुक्त राष्ट्रसंघ दिएको छ । वर्सेनी नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो उपस्थिति गराउँदै आएको छ र पनि नेपाली राजनीतिका बडेमानहरूले नेपालको सार्वभौमिकता भारतले खाइ दिएको कोकोहोलो मचाउनेहरूको कमी भने छैन । त्यसको जवाफ मोदीले बडोस्पस्ट भाषामा दोस्रो संविधान सभामा गरेको सम्बोधनमा दिइहालेका छन् । नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो । बल्ल नेपालीहरूको आंशका मेटिएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालीहरूको मनमस्तिष्कमा बसिरहेको त्यो तुसलाई यसरी सफा गरिदिएका थिए ।
यसरी यी दुई मुद्दाका आधारमा राजनीति गरिरहनेहरूको राजनीतिक एजेन्डा मोदीको भ्रमणले लुटिएको छ । नेपाली राजनीतिमा यस्ता खेलाडीहरूको भूमिका समाप्त भएको छ । त्यसैगरी नेपालको सुखदुखको साथी भारत रहेको र रहिरहने सन्देश पनि मोदीले दिए । उनले प्रस्ट भने. नेपाल दुखी रहे भारत खुसी रहन नसक्ने बताए । नेपाल अध्यारोमा रहे भारतलाई चित्त प्रसन्न रहनेछैन् । यसका लागि भारतले हरसम्भव पर्यत्न गर्नेछ तपाईहरू भन्नुस भारतले पूरा गर्नेछ ।
मोदीले यसरी नेपालसँगको मित्रतालाई व्याख्या गरेका छन् । नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । भारतले नेपालको जलस्रोतमा आँखा गाडिरहेको छ । भारत ऊर्जाको भोको रहेको छ । उसलाई नेपालबाट जलस्रोतको दोहन गर्नुछ । यस्ता नानाथरी समाचार शीर्षकमा राजनीति गर्नेहरू र आफ्ना खेतीपाती चलाउनेहरूको कमी रहेको छैन । यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएका भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रस्ट पारे । हामीले तपाईको बिजुली सित्तैमा लिन खोजेका छैनौं । त्यसको उचित मोल तिर्छौं । भारतलाई नेपालको बिजुली निकालेर आफ्नो गर्जो टार्नु भन्दा पनि उपाय गर्नु राम्रो हुँदाहुँदै नेपालको जलविद्युत मित्रतालाई बढावा दिन खोजेको विषय ती खेलाडीहरूलाई थाहा छैन । नेपालले आफ्नो बिजुली निकालेर विजुली बेच्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । बिजुलीको खरिदार नभए टाढा बेच्नु पर्ने भो भने त्यसको लागत बढने र खरिदकर्ता कम हुने आधुनिक आर्थिक सिद्धान्तको फेरिहस्त बुझेका विद्वानहरूले पनि भारतले नेपालको जलविद्युतमा आँखा गाडेको विचार फैलाउन सक्रिय रहेकंै छन् । त्यस्तालाई मोदीको जवाफ प्रस्ट भएको छ । तपाईका बिजुली सित्तैमा लिने छैनौं । तपाईका बिजुलीको मूल्य तिछौं । तपाईहरूले आफ्नो बिजुलीको मोल लगाउनुस हामी किन्न तयार छौं । यस्तो भनिरहँदा नेपालीहरूलाई विश्वास भयो । र ती राजनीतिका खेतीपाती गर्नेहरूले फैलाएका भ्रम चिरियो ।
मोदीले यस्तो गर्न सफलता पाएका छन् । यी सबै कुरो मोदीले एक सय दिनमा पूरा गरेका छन् । भारतसँग बिजुली उत्पादन र खरिद बिक्री सम्झौता पूरा भएका छन् । नेपालीहरूको हितमा अरूण तेस्रोको पीडीए सम्भौता पूरा भएको थियो । यसरी अरूण तेस्रोबाट निस्कने बिजुलीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग हुने. र लोडसेडिङको समस्यामा कमी ल्याउन सहायक हुनेछ । एक सय दिन भित्र दुई पटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका मोदीले नेपाली कृषि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध गराए । माटो परीक्षण गरिएपछि तदनुरूपको बाली उत्पादन गर्ने कार्य पूरा गर्दा उत्पादन बढी हुनेछ । कृषि उत्पादनमा बृद्धि भए अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ । यसली कृषि क्षेत्रमा घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशालाको उपयोगिता धेरै महत्वपूर्ण साबित हुनेछ । अब किसानले खेती गरेपछि बाली नआएपछि दुख मनाउ गर्न आवश्यकता त्यतिको हुनेछैन् । अन्य सबैकुरा ठीक भए माटो अनुसारको बाली लगाउँदा उत्पादन औसत अपेक्षित हुने पक्का हुनेछ । त्यसैले मोदीले दोस्रो भ्रमणका क्रममा दिएको घुम्ती प्रयोगशाला कृषि क्षेत्रको वरदान साबित हुनेछ । त्यतिमात्रै होइन नेपाल र भारतका सहरहरूबीचको विशेष सम्बन्ध विकास गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । नेपाल र भारतका ती सहरहरूबीच बस सेवाको उद्घाटन मोदीले गरेर नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई एक नयाँ उचाई दिएका छन् ।
दोस्रो पटक मोदीले संविधानलाई सहमतिको आधारमा बनाउन भनेर दिएको अभिव्यक्तिबाट मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायलाई हौसला मिलेको छ । अधिकार विपन्नहरूको लडाईमा आफ्नो साथ सदैव रहने जनाउँदै मोदीले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । नेपालमा अधिकार र पहिचान विप्पनहरूले अधिकार पाउनुपर्ने भनाई प्रतिको दृढतालाई स्पस्ट पारेका छन् । मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट मधेशीहरूको राजनीतिक दल र आदिवासी राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्ष गरेका माओवादीहरूलाई हौसला मिलेको बाट मोदी गरिब निमुखाको लडाई लडनेहरूको साथमा आफू रहेको प्रस्टिएको छ ।
परम्परागत अवधारणामा शासन गर्ने जनताको दोहन गर्ने प्रवृतिका पक्षपोषणहरूले मोदीको अभिव्यक्तिलाई कुटनीतिक मर्यादा विपरीत भनेपनि उनको अभिव्यक्ति आम जनताका लागि सही साबित भएको छ । बलपूर्वक ल्याइने संविधानबाट नेपालमा हुने अशान्तिबाट नेपाली सीमामा बस्नेहरूका लागि मात्रै होइन भारतका लागि अप्रिय विषय भएको बुझाई बुझेर अभिव्यक्ति दिनु जनप्रिय अभिव्यक्ति बाहेक अन्य केही हुन नसक्ने आम नेपालीको बुझाई छ र हुनुपर्छ ।
मधेश र भारतको सम्बन्ध पौराणिक कालदेखि रहँदै आएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । भगवान राम र माता सीताको विवाहले पनि मधेश र भारतको सम्बन्ध कुटनीतिक, राजनीतिक नभई जनजनबीचको सम्बन्ध रहेको छ । पहिला–पहिला भारत र नेपालको उच्चस्तरीय सम्बन्ध ‘दिल्ली–टु–काठमाडौं’ हुने गरेको थियो । छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू राजनीतिक स्तरमा मात्र सीमित हुने गरेको थियो । तर, अब परिवेश बदलिँदै छ । हुन त भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण गर्ने पनि कमै हुने गरेको छ । नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारत पुग्नेपर्ने देखिएको छ ।
यता, भारतका प्रधानमन्त्रीको करिब सात दशकपछि नेपालको मधेश भ्रमण हुँदैछ । यसअघि १९५० मा कोशी ब्यारेज सप्तरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गर्न लागेको यो भ्रमणबाट मधेशका आठ जिल्लासहित समग्र मधेशवासी उत्साहित देखिएका छन् । प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य तथा स्वच्छता अभियानी राम आशिष यादवले यो भ्रमण एउटा धार्मिक भएपनि यसले सामाजिक, आर्थिकर विकामा ठूलो भूमिका खेल्ने बताए ।
मोदी नेपाल भ्रमणको क्रममा सबभन्दा पहिला जनकपुरधामबाटै प्रवेश गरेका छन् । भारतको पटनाबाट नेपालको जनकपुरधाममा सिधा प्रवेश गर्नु मधेश र खासगरी जनकपुरधामका लागि बडो महत्वपूर्ण मानिएको छ । उनको यो भ्रमणले जनकपुरधाममा वर्षौंदेखि हुन नसकेको चमत्कार भएको विभिन्न किसिमका टिप्पणीहरू हुँदैछन् । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र नेता कार्यकर्ताहरू झाडु लिएर सडकमा उत्रेको दृष्यहरू हेर्न पाइयो । तर, त्यो तदारूकता देखावटी मात्र हो कि वास्तवमै जनकपुरधामलाई स्वच्छ बनाउने त्यो त पछि हेर्न नै बाँकी छ । यद्यपि, मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणले ऐतिहासिक धार्मिक आस्थाको रूपमा रहेको जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने आशा पनि गरिएको छ । जनकपुरधाममा पर्यटनको सम्भावना पनि बढ्दै गएको बुझिन्छ । प्रदेश २ को राजधानीको रूपमा रहेको जनकपुरधामले यस भ्रमणपछि विकासमा फड्को मार्ने निश्चितझैं भएको छ । यसैबीच रंगभूमि मैदान बाह्रबिघामा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा मोदीले जनकपुर आसपासका क्षेत्रको विकासका लागि एक अर्ब दिने घोषणासमेत गरे । योसँगै अब जनकपुरधामको मुहार फेरिने आशा गरौं ।
257 पटक हेरिएकाे
पछिल्लाे - अभावै अभाव गाँउ सरकारका राजधानी
अघिल्लाे - ओली–दाहालबीच वान टु वान वार्ता सकिए लगत्तै दुवै दलको बैठक आव्हवान